Izindaba - Ungayifaka kanjani i-pvc wall panels
Amapaneli odonga e-PVC ayindlela enhle yokuhlobisa udonga. Umphumela wokuhlobisa usezingeni eliphezulu kakhulu futhi intengo iyabiza. Udinga ukufunda ulwazi oluthile lapho ufaka, ukuze ukwakhiwa komhlobiso kusheshe futhi umphumela wokuhlobisa uqinisekiswe. Ake ngikwazise, ​​ukuthi ungafaka kanjani i-pvc wall decoration board?
1. Ungalifaka kanjani ibhodi lokuhlobisa udonga lwe-pvc
1. Uma uhlobisa, ungakhetha uhlobo olomile lokumiswa, kufaka phakathi ukulungisa ikhebula odongeni olungezansi kuqala, nokuxhuma ibhodi yokuhlobisa ukushisa okuhlobisa nge-keel ngokusebenzisa amalunga wensimbi noma amahange akhethekile. Amalunga phakathi kwamalunga angavalwa ngohlelo lwangaphandle lokuvikela udonga lwebhodi elikhishiwe, ibhodi le-benzene noma uboya bedwala. Gcwalisa.
2. Uhlobo olufakwe ngokuphelele lulungele amaphrojekthi wangaphakathi odonga wangaphakathi. Ngakho-ke, ngesikhathi sokufakwa kohlelo lwangaphandle lokufudumeza okushisayo, ibhodi elihlanganisiwe lokuhlobisa elishisayo nodonga olungezansi luxhunywe kuphela ngokuxhuma noma ukubopha okuphelele, okubizwa ngokuthi uhlobo oluhlanganiswe ngokuphelele. Indlela yezandla kufanele inqunywe ngokuya ngezidingo zokwakhiwa kwesakhiwo esithile. Sebenzisa udaka olukhethekile oluhlangene noma ezinye izinto ukugcwalisa isikhala phakathi kwamalunga.
3. Inhlanganisela yentambo okusetshenzwa kulengwa kuyo kanye nentambo okusetshenzwa kulengwa kuyo incike kakhulu kuzidingo zokwakha. Uhlelo lwangaphandle lokufudumeza lokushisa lwebhodi lokuhlobisa elishisayo luhlanganiswe nejoyinti nenduku yesikhonkwane ukulungisa ibhodi lokuhlobisa elishisayo odongeni. Isisekelo sihlanganiswe ne-pendant eboshwe ngokuphelele futhi yomile, futhi isetshenziswa kakhulu kwezobunjiniyela.
2. Isingeniso sezinzuzo zodonga lwe-PVC
1. Inzuzo enkulu isisindo sayo esincane. Abasebenzi babekhululeke kakhulu ngenkathi kwakhiwa. It has omuhle ukushisa ukwahlukanisa kanye nomsebenzi ukushisa ukulondolozwa. Sebenzisa ibhodi lokuhlobisa udonga lwe-PVC. Ngomqondo othile, kubuye kube nobungane kakhulu nemvelo. Indlu le kusebusika. Ihlobo lifudumele futhi lipholile, lisusa isidingo somoya opholile futhi lilondoloze amandla amaningi, kepha futhi linezinzuzo zobufakazi bomswakama, ukuvimba ilangabi, ukumelana ne-asidi ne-alikhali, ukumelana nokugqwala, ukufakwa kwasekhishini noma kwendlu yangasese noma izindonga zokuhlobisa.
2. Amapaneli odonga e-PVC ahlobisayo anokuqina okuphezulu nezakhiwo ezinhle zedielectri. Ngemuva kokusetshenziswa kwesikhathi eside, ihlala isikhathi eside kunezinye izinto zokuhlobisa udonga. Akakwesabi ukugqama nokukhanya kwelanga. Inezinto ezinhle zokulwa nokuguga. Kulula ukuxhuma emlonyeni futhi kunamathela kakhulu odongeni.
3. Isakhiwo esiphakeme, amandla okugoba okuphezulu, ukumelana nomthelela oqinile, ukunwebeka okuphezulu ngesikhathi sekhefu, okonga izinto ngemuva kokuqeda umhlobiso, akulula ukudala ukungcola nokonga izindleko zomhlobiso. Ibhodi lokuhlobisa udonga lwe-pvc linobuso obushelelezi, imibala egqamile, amaphethini ahlukahlukene, imiphumela ecebile ngokwedlulele yokuhlobisa, nezinhlobonhlobo zezicelo zokuhlobisa.
4. Inqubo yokwakha ilula kakhulu, kulula kakhulu ukuqala ukufakwa ekhaya, futhi ukufakwa kulula kakhulu. Ibhodi lokuhlobisa udonga lwe-PVC kulula ukulihlanza empilweni yansuku zonke. Akesabi noma yisiphi isobho noma izingane ezenza i-graffiti ngokuthanda kwazo. Vele usule ngobumnene ngendwangu emanzi ukubuyisa inhlanzeko.
5. Ibhodi lokuhlobisa udonga lwePVC liyimpahla yomhlobiso wepulasitiki. Ibhodi le-PVC lenziwe ngesakhiwo sezinyosi sezinyosi. Ngenxa yokucaciswa kwayo, imibala namaphethini, ihlobisa kakhulu, yaziwa nangokuthi ifilimu yokuhlobisa, engasetshenziselwa umhlobiso wasodongeni nophahla lwasendlini, futhi isetshenziswa kakhulu ngezitayela ezahlukahlukene zokuhlobisa ikhaya.